के लालु यादव रिहा होलान् : अदालतको आदेशपछिपनि किन अझै जेल ?:: Naya Nepal
के लालु यादव रिहा होलान् : अदालतको आदेशपछिपनि किन अझै जेल ?
राँची, (रासस–एएनआई) । बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं भारतीय राजनीतिका चर्चित व्यक्तित्व लालु प्रसाद यादवलाई झारखण्ड उच्च अदालतले शुक्रबार एउटा मुद्दामा जमानत दिएको छ । चारा घोटालासँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा उहाँलाई जमानत दिएको अदालतले जनाएको छ ।
बिहार विधान सभाको चुनावअघि यादवलाई एउटा मुद्दामा जमानत दिएसँगै बिहारको चुनावी राजनीति तरंगित बनेको छ । तर, यादवमाथि लागेको चारा घोटालासँग सम्बन्धित अर्को मुद्दा भने विचाराधीन अवस्थामै रहेकाले यादव जेलमै रहनु पर्नेछ । श्री यादव हाल स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै महिनौंदेखि राजेन्द्र इन्स्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेजमा भर्ना हुनु भएको छ ।
लालु यादव सन् २०१७ को डिसेम्बरदेखि जेलमा हुनुहुन्छ । उहाँले भारतीय फौजदारी संहिता बमोजिम सात वर्ष र चारा घोटाला सम्बन्धी अर्को मुद्दामा सात वर्षको जेल सजाय पाउनु भएको छ ।
लालु यादव बिहारको मुख्यमन्त्री भएका बखत सन् १९९१ र १९९६ मा बिहारस्थित पशुपालन विभागको एक परियोजनाबाट गैरकानुनी तरिकाबाट तीन करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँ झिकेको यादवमाथि आरोप छ ।
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत मृत्यु प्रकरणमा झण्डै महिना दिन कारावास बिताएकी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती जमानतमा रिहा भएकी छिन् । उनी रिहा भएपछि राजपूतकी बहिनी श्वेता सिंह कीर्तिले धैर्यता र विश्वासको ट्वीट गरेकी छिन् ।
श्वेता र उनको परिवारले रियालाई मृत्यु प्रकरणमा जोडेर आरोप लगाउँदै आएका थिए । बुधवार, बम्बई उच्च अदालतले २८ दिन पछि उनी सम्बन्धीत मुद्धामा जमानत दिएको हो ।
श्वेताले सुशान्तका फ्यानहरूको लागि सामाजिक सञ्जालमा सन्देशहरू साझा गर्दै आएकी छिन् । ७ अक्टुबरमा, उनले एक ट्वीट गरिन्, ‘मुश्किल समय अन्तिम हुँदैन, तर महान मान्छेहरूले सामना गर्छन् । हामी मजबूत र शक्तिशाली छौँ । हामीले केवल आफ्नो बलमा विश्वास गर्नुपर्दछ । बलियो रहनु भनेको एउटा कला हो र आफैले आफैलाई वचन दिन्छ कि जेसुकै भए पनि मबाट जे हुन्छ, मँ पनि विभाजन हुनेछैन ।’
४ अक्टूबरमा श्वेता लेख्छिन्, ‘विश्वासको परीक्षा भनेको त्यो हो जब तपाई परीक्षाको क्रममा दृढ र अटल रहन सक्नुहुन्छ । मेरो परिवारलाई भगवानमाथि विश्वास गर्न र हार्दिक प्रार्थना गर्न अनुरोध गर्दछु । सत्य प्रकट होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् ।’ रियालाई १ लाख भारु जमानतमा रिहा गरिएको हो । रियाको परिवारले छोरीलाई अनावश्यक दुःख दिएको र छवि बिगार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कोरोना भाइरस हावामा व्यापक फैलिसक्यो ६ फिटसम्मको दूरीमा सजिलै सर्छ !
एजेन्सी । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन (सिडिसी) ले कोरोना भाइरसको नयाँ गाइडलाइन्स जारी गरेको छ । सिडिसीले कोरोना भाइरस व्यापक फैलिएको जनाएको छ । तर, सिडिसीले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएसँगै हावामा कोरोना भाइरस व्यापकरुपमा फैलिइरहेको छ ।
आफ्नो गाइडलाइन्समा सिडिसीले ससाना ड्रपलेट्स र कणहरुमा कोरोना भाइरस फैलिएकाले पछिल्लो समय संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको जनाएको छ । कोरोना भाइरस हावामा केही मिनेटदेखि घन्टौँसम्म रहने गर्छ । हावामा फैलिएको भाइरस ६ फिटको दूरीसम्मका व्यक्तिमा सजिलै सर्ने गरेको सिडिसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
एयरबोर्न ट्रान्ससिनको रुपमा भाइरस फैलिएको निष्कर्ष अनुसन्धानकर्ताले गरेका छन् । एक संक्रमितले ६ फिटसम्म टाढा बसेको अर्को व्यक्तिमा कोरोना सार्न सक्छ । यो अध्ययन पर्याप्तमात्रामा हावा खेल्ने नभएको ठाउँमा गरिएको थियो । व्यक्तिले लामो लामो स्वास लिएको, गीत गाएको वा एक्सरसाइज गरेको समयमा व्यक्तिले झन्झन् कोरोना भाइरस फैलाएको पाइएको छ ।
वैज्ञानिकहरुले कोरोना संक्रमितबाट निस्किएका ससाना ड्रपलेट दोस्रो व्यक्तिमा संक्रमण हुनका लागि पर्याप्त हुने भएकाले सतर्कता अप्नाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कोरोना संक्रमित व्यक्ति रहेको ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरु कोरोना संक्रमित भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । वैज्ञानिकहरुले हावाको माध्यमबाट कोरोना फैलिन रोक्ने उपायका विषयमा सबैजना सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
एकजना व्यक्तिले एक पटकमा हजारौँ भाइरस हावामा छोड्ने गरेको पाइएको छ । संक्रमितले खोक्दा, हाच्छियू गर्दा, गीत गाउँदा, कुराकानी गर्दा र स्वास लिँदा पनि कोरोना भाइरस निस्किने गर्छ । त्यसरी निस्किएको भाइरस केही मिनेटदेखि घन्टौँसम्म हावामा रहने गरेको छ ।
गुरुत्वाकर्षणका कारण ठूला ड्रपलेट्स जमिनमा झर्ने गर्छन् भने स९साना ड्रपलेट्स र कण हावामा फैलिने गर्छन् । सिडिसीले नयाँ गाइडलाइनमा ६ फिट टाढा रहन र हावामा फैलिएको कोरोना रोक्ने उपायका विभिन्न विषयमा सोच्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।